IBC2019: I-New Cobalt Digital Solutions Support 4K Workflows ye-Studio neZicelo Zeselula - I-NAB Show News ngu-Broadcast Beat, Umsakazi Osemthethweni we-NAB Show - I-NAB Khombisa
Ikhaya » Izindaba » IBC2019: I-New Cobalt Digital Solutions Support 4K Workflows ye-Studio ne-Izicelo Zamaselula
IBC2019: I-New Cobalt Digital Solutions Support 4K Workflows ye-Studio ne-Izicelo Zamaselula
I-CHAMPAIGN, Ill. - Aug. 13, 2019 - I-Cobalt Digital izokhombisa izixazululo zayo ezisekelwa ekhadini i-4K kanye ne-HDR yokuhamba komsebenzi ozimele ovulekile we-GGarar ngenyanga ezayo e-IBC2019 e-Amsterdam (Stand 10.B44). Izithombe ezinhle kakhulu zomkhiqizo zizofaka ama-decoder awo amasha kanye nama-encoder, i-RIST Main Profile, isisombululo sokuguqulwa se-bi-directional SDR / HDR ukukhiqizwa okubukhoma, kanye nama-multiviewers amasha nama-amplifiers wokusabalalisa. Futhi, inkampani izokhipha isisombululo esisha se-12G openGear ne-RIST esangweni.
Uchungechunge olusha lwe-9992-DEC lwe-HEVC / AVC / MPEG-2 ama-decoders we-openGear luzokwethulwa embukisweni. Njengochungechunge lwenkampani lwe-9992-ENC lwe-encoders, i-9992-DEC yenkampani eguquguqukayo ifaka ilayisense ekhokha njengoba usudingeka, ngakho abasebenzisi bakhokha kuphela izici ezidingekayo lapho zidingeka. Idizayinelwe ukufeza izidingo ezibucayi zabasakazi banamuhla, i-9992-DEC isekela kuze kufinyelele kusinqumo se-4K futhi inikela ngokugcwalisa okugcwele kwamandla okuhumusha okulalelwayo. Lolu chungechunge lufaka ne-9992-2DEC d-single-single decoder, kanye ne-9992-DEC-4K-HEVC enesiteshi esisodwa i-4K noma i-2K eye-265K.
Ngasekuqaleni konyaka, uCobalt ubengomunye wezinkampani eziningana ukuthola i-Emmy® Award ngomsebenzi wayo obambisanayo ku-ARQ, ubuchwepheshe obusebenza ngaphansi kwe-RIST. Ku-IBC, iCobalt izosebenzisa ukusekelwa kwe-RIST Main profiles, engeza izici ezinjengokubethela (i-DTLS noma i-PSK), ukuhleleka, ukusatshalaliswa kwe-NAT, ukusatshalaliswa kwe-point-to-multipoint, ukusebenza kwamanani amancane, kanye nokuhamba kwe-ST-2110 okuthembekile.
Ukuthuthuka okusha ku-HDR embukisweni kufaka phakathi ukuhamba okuphelele kokuphela kwe-HDR ngaphakathi kweCobalt's 9904-UDX-4K phezulu / phansi / isiguquli sesiphambano. Isebenzisa Suite yeTechicolor yamathuluzi we-HDR, angahlanganiswa ku-oda elilodwa lokuhlela, i-9904 ingakhiqiza metadata eguquguqukayo lapho iguquka isuka ku-HDR iye ku-SDR bese ibuyela emuva ku-HDR, igcina imininingwane ephelele yesithombe ye-HDR.
I-Cobalt iyaqhubeka nokuthuthukisa uchungechunge lwayo oludumile lwe-9971 yama-multiviewers, ingeza ukuphuma okungabili kanye nokulawulwa komsebenzisi. Ukuhambisa ukuqapha okungelula kwe-asynchronous 4K ne HD amasiginali, wonke amamodeli amathathu ahlanganisa amasignali ahlukahlukene kanye nokusetshenziswa. Wonke amamodeli nawo afaka I-HDMI Imiphumela yokubuka komnotho kwizinombolo ze-4K zabaqaphi. Amasethingi wethempulethi enenkinobho eyodwa enza lula ukusetha, kepha abasebenzisi bangakha futhi balondoloze izakhiwo ezenziwe ngezifiso. Kufika kuma-9971 angafakelwa ohlakeni olulodwa lwe-2 RU openGear - futhi amakhadi amaningi kuketanga elihlanganisiwe anganikezela ngezakhiwo ezingama-multiviewer zemithombo efinyelela ku-64.
Uchungechunge olusha lwe-9915 lwe-DAs lusekela imithombo ye-4K 12G-SDI futhi livumela ukugijima kwe-zethusi isikhathi eside ngokwanele ukufinyelela imishini eminingi ngaphakathi kolawulo lwe-master. Eyodwa yamamodeli amane ochungechungeni, i-9915DA-4 × 16-XPT-12G, ifaka iziteshi ezine zokufaka ezingahanjiswa ngokuqondile kokuphuma kwe-16 DA kulungiselelwa okuningi. Kufika kumakhadi we-10 angafakwa kufreyimu eyodwa evulekile, okuvumela ukufika kuziteshi ze-40 zokufaka nokusabalalisa kuze kufinyelele ekuphumeni kwe-160.
"Abasakazi manje sebemukela i-4K njengokujwayelekile kokukhiqizwa, futhi iCobalt inemenyu ebanzi yezisombululo ezenzelwe ukuvula izikhungo ezenzelwe ukukhiqizwa kwama-studio nezokukhiqiza amaselula," uChris Shaw, iphini likamongameli omkhulu wezokuthengisa nokumaketha, I-Cobalt Digital. "Imikhiqizo yethu ihlinzeka ngezindlela eziguqukayo nezingabizi kakhulu zokucubungula, ukuqapha, kanye nokusabalalisa okuqukethwe kwe-4K nokuqukethwe kwe-HDR."
Eminye imikhiqizo eCobalt booth izofaka ikhadi elisha le-12G-SDI elivulekile le-12 × 12 umzila we-matrix. Idizayinelwe ukulingana nozimele bamafa, ikhadi lisiza abathengi ukuthi basebenzise iziqhingi ze-4K zibiza kahle. Ibonisa ubuholi be-RIST ubuchwepheshe, i-Cobalt futhi yethula i-SafeLink, isisombululo esivulekile esingathatha ukusakaza okuningi nokuhlinzeka nge-RIST wrapper ukuvikela izixhumanisi zevidiyo phakathi kwamaphoyinti amabili.
Mayelana I-Cobalt Digital
I-Cobalt Digital I-Inc. yakhiqiza futhi ikhiqiza amadivaysi anqunyiwe anikezela umklomelo osiza ukukhiqiza ukukhiqizwa kwamavidiyo kanye nokulawula kahle amaklayenti ukuguqulwa ku-IP, i-4K, i-HDR, ifu, nangaphezulu. Njengomlingani osungula ohlelweni oluvulekile lwe-OpenGear® nelungu eliziqhenya SMPTE, I-Cobalt iphinde inikeze i-platform yokusebenzisana engcono kakhulu eyenza ukuthi kube lula ukutholwa kwezobuchwepheshe. Isakazwa ngenethiwekhi yomthengisi yomhlaba wonke, abahlanganisi bohlelo, nabanye abalingani, I-Cobalt Digital imikhiqizo ixhaswe ngewaranti yeminyaka emihlanu. Funda kabanzi ku www.cobaltdigital.com.
Ingqungquthela ye-SVG: I-FOR-A Yokususa Ububanzi Bomkhiqizo Ohlanganiswe Nabo - Disemba 6, 2019
I-12G-SDI 4K CES2017 I-Cobalt Digital I-Cobalt Encoder i-decoder Ikhompiyutha I-Graham Chapman i-Prmoted to Editor HDR I-IBC i-isovideo, i-viarte, i-HDR, ukunciphisa komsindo, i-HDR / i-WCG, i-HEVC / AVC, i-HEVC, i-JCT-VC, i-2015, i-bitrate ukunciphisa, immersive, i-UHD / i-4K / i-HD, i-H264 / i-H265, i-Warsaw I-Multiviewer RIST I-SoftAtHome, i-MStar, i-CES2017 Ama-spears nama-Arrows umbhalo we-subtitling, i-Digital Nirvana, ukuqapha imidiya, i-IBC I-TVU Izinethiwekhi	2019-08-13
Ngaphambilini: I-1606 Studio Memaka Isithupha Senyanga Isikhumbuzo nge-Work for BMW, UCSF Health, Carl's Jr and More.
Olandelayo: I-VFX Legion Idala Imiphumela Yokuthi 'Ukudla Okwakhile eMelika,' i-New Studio yakwaDocudrama Mini-Series